Waqtiga iyo tartanka nolosha W/Q: Aqwaan Xasan Jidhi | Laashin iyo Hal-abuur
Waqtiga iyo tartanka nolosha W/Q: Aqwaan Xasan Jidhi
Waqtiga iyo tartanka nolosha
Marka uu ku dhaliilo qof aad ka simantihiin astaamaha horumarka xagga dhaqaalaha tacliinta iyo deegaankaba waxay ka dhigantahay tusaaleyn nafsadaadana siin karta jaanis ay qaladkeeda ku garwaaqsato. Balse adduunyada looma sinnee haddii uu dhaleceyn kuu soo jeediyo qof kaaga sarreeya dabaqada nolosha ha ahaato dhanka bulshada ama xagga deeqda rabbi waxaad dareemaysaa liidnaan iyo yasitaan taas oo ibnu aadamku ku qasabta xilliyadda qaar inay ku kacaan falal aargoosi ah amaba ugu yaraan ay ku noqoto uur ku taalo iyo aano aanan marna duugoobin.
Waxay ii ahayd qeyb kale oo kamid ah silsiladdi noloshayda, waxaan ka mid noqday kumanaanka qof ee u barakacay duleedyada magaalada Muqdisho halkaas oo aan ku wajahay waqtiyo aad u adag. kuwaas oo nolosheydi u rogay mid aan jirin, waxaa baa ba”ay rajo walba oo aan lahaa, waxaana quus ka istaagay dhammaanba himilooyinkeygi, oo ay igu horreeyeen inaan noqdo nin reer leh oo guursada gabadhi uu noloshiisa jeclaa, oo waa tuma gabadhaasi ?
Saaxiibkeey liibaan sida aan ku maqlay sheekooyinka qaar wuxuu noqday masuul sare oo ka tirsan dowladda maanta xamar ka taliso.Shalay galab mar aan wadada via roma kursi ku fadhiyo oo aan dadka ka iibinayo rootiga. waxaa wadada soo maray gaari madoow oo uu daba socday gaari kale oo ay saarnaayeen ciidan ilaalo ah. meel agtayda ah ayuu istaagay gaarigi madoobaa waxaana kasoo dagtay nin umuuqday inuu kamid yahay dadka dibadaha ka yimid. wuxuu u labisnaa sida nin madax ah. ookiyaalo madoow ah ayuuna watay. inta uu ii soo dhowaaday oo uu ookiyaalihi iska bixiyay. runtii marki aan wajigiisa arkay waxaan kusoo xusuustay waxyabo badan. asigoo dhoollacadeynaya ayuu iweydiiyay ma itaqaanaa?………..